Ngo-2019 ukugqitha ngempumelelo kuhlolo lwe-Ethiopia lwe-GMP
Ukusukela nge-21 ka-Okthobha ukuya kowama-23 ku-2019, u-Hebei Depond wamkele ukwamkelwa kunye nokuvunywa kweCandelo lezolimo lase-Ethiopia. Iqela lokuhlola liphumelele uvavanyo lweentsuku ezintathu kunye nokuphononongwa koxwebhu, kwaye bakholelwa ukuba u-Hebei Depond wayehlangabezana neemfuno zolawulo ze-WHO-GMP ...
Ngo-2019 kuphumelele uvavanyo lwe-GMP lukazwelonke
Ukusukela nge-19 ka-Okthobha ukuya nge-20, ngo-2019, igqirha lezonyango lwe-GMP kwi-Hebei liqhube isithuba seminyaka emihlanu se-GMP kwi-Depond, kwiPhondo le-Hebei ngokuthatha inxaxheba kweenkokheli zephondo, ezomasipala kunye nezesithili kunye neengcali. Kwintlanganiso yokubulisa, Mnu Ye Chao, u ...
Ngo-2019 ku-17 ye-China i-China International Husbandry Expo-Wuhan
Ngomhla we-18 kaMeyi, ngo-2019, nge-17 (ngo-2019) i-China Animal Husbandry Expo kunye ne-2019 i-China International Animal Husbandry Expo yavula iZiko lase-Wuhan International Expo. Ngenjongo kunye nomsebenzi ophucukileyo okhokelela kuphuhliso lweshishini, i-Animal Husbandry Expo iza kubonisa kwaye ikhuthaze ...
Ukusuka nge-15 kaDisemba ukuya kowe-19 ka-2019, u-Hebei Depond wamkele ukwamkelwa nokwamkelwa kwe-Ofisi yoMphathiswa Wezolimo eSudan. Iqela lokuhlola lidlule kwiintsuku ezine kuhlolo lwesiza kunye nokuphononongwa kwamaxwebhu, kwaye bakholelwa ukuba u-Hebei Depond uhlangabezane neemfuno zolawulo ze-WHO-GMP zoMphathiswa Wezolimo ...
Thobela ngonyaka ka-2019 iRussia yaMazwe ngaMazwe aMadoda aSapho
Ngomhla we-30 ka-Meyi ngo-2019, ngo-2019, ukubanjelwa kwezilwanyana kumazwe aphesheya eMospo kwakubanjelwe eMoscow, iRussia, indawo leyo yabanjwa ngempumelelo kwi-International Convention yaseMoscow krokus International Exhibition. Umboniso wathabatha iintsuku ezintathu. Bangaphezu kwama-300 ababhentsisi kunye nabathengi abangaphezu kwama-6000 abazimase ...
Thobela kwi-2019 Thailand VIV Asia - Bangkok
Ukususela ngo-1991, i-VIV Asia ibibanjwa kanye kwiminyaka emibini. Okwangoku, ibambe iiseshini ezili-17. Lo mboniso ugubungela ihagu, iinkukhu, iinkomo, iimveliso zasemanzini kunye nezinye iintlobo zezilwanyana, itekhnoloji kunye neenkonzo kuzo zonke iinkalo zobubanzi bemveliso ukusuka “ekutyeni ukuya ekutyeni”, kuqokelelwa ...
Thobela ngo-2019 I-Bangladesh International Animal Husbandry Expo
Ngomhla we-7 ukuya kowe-7 ku-Matshi, u-Hebei Depond uthathe inxaxheba kwi-Bangladesh yase-Bangladesh yamazwe angama-Animal Husbandry Expo, eyayiyimpumelelo enkulu kwaye waphumelela kakhulu. I-Bangladesh yenye yezona ntengiso zibaluleke kakhulu zentengiso yezolimo kunye nemfuyo kule minyaka idlulileyo. Ukwenzela ukuphucula ukhuphiswano kwezolimo ...
Thobela kwi-VIV Nanjing 2018
Ukusukela nge-17 kaSeptemba ukuya kowe-19, i-VIV 2018 i-China yamazwe aphesheya yabonisa ukubanjwa kwezilwanyana eNanjing, ikomkhulu lase China. Njengomoya wecandelo lokufuya izilwanyana kumazwe aphesheya kunye nendawo yokuhlanganisela apho iingcali, zingaphezu kwama-500 zemiboniso yasekhaya neyangaphandle ...
I-2018 yehla kwi-16 ye-China China yeZilwanyana zaseMelika Expo-Chongqing
Ngomhla we-18 kaMeyi, umhla we-16 (ka-2018) iChin Husbandry Expo yase-China yavulwa ngokumangalisayo kwiZiko i-Expo laseChongqing. Lo mboniso udlule iintsuku ezintathu. Kwindawo yemiboniso yeemayile ezi-200000 zeemitha, amawaka ngamashishini adumileyo aphesheya nawangaphandle ahlanganisene apha. Ngexesha loMyeni weSilwanyana ...
Ukudlulela ngempumelelo kuhlolo lweLibya lwe-GMP ngo-2018
Ukusukela nge-24 kaMatshi ukuya kowama-26, i-2018, u-Hebei Depond wamkele ukuhlolwa kweCandelo loMphathiswa Wezolimo eLibya. Iqela lokuhlola liphumelele uvavanyo lweentsuku ezintathu kwisayithi kunye nokuhlolwa kwakhona koxwebhu, kwaye bakholelwa ukuba uHebai Depond uyahlangabezana neemfuno ze-WHO-GMP, kwaye wanika uvavanyo oluphezulu lweHebei Depond. Oku ...
I-2018 yehla kumboniso we-14th ye-Kazakhstan kumhlaba wamazwe aphesheya kwezolimo-i-Astana
Umboniso wezolimo waseKazakhstan wamiselwa yiTNT International Exhibition Inkampani yaseMelika kwaye ubanjwe ngempumelelo kangangezihlandlo ezili-13. Kwimiboniso yonyaka, ababonisi abavela kwihlabathi liphela babandakanyeka kumatshini wezolimo, ezolimo kunye nokufuya izilwanyana ...
Ngo-2017 ukuhla kwe-6th Pakistan yezilwanyana zaseMelika Expo-Lahore
Ukusukela nge-24 ka-Agasti ukuya kowama-26 ku-2017, umboniso we-6th wePakistan wezilwanyana wokufuya izilwanyana wabanjwa eLahore. UHebei Depond wabonakala ngendlela emangalisayo kwiinkukhu zasePakistan Expo, ngexesha ekwenziwa udliwanondlebe nalo ziindaba zalapha ekhaya. UHebei Depond, njengendoda yokuthengisa izilwanyana yaseTshayina kunye neshishini lamayeza, w ...